HOR DHAC: Germany V Italy (Libaaxyo luqmaha isla gali doona, taariikhda Azzurri ayey u xaglineysaa balse kolkan waa iyama?) – Gool FM
HOR DHAC: Germany V Italy (Libaaxyo luqmaha isla gali doona, taariikhda Azzurri ayey u xaglineysaa balse kolkan waa iyama?)
Kaafi July 1, 2016
(Bordeaux) 02 Luulyo 2016. Italy waxaa ka maqnaan kara kulanka ay Sabtida Germany wareega sideed dhamaadka la leeyihiin Daniele De Rossi.
Khabiirka Roma waxa uu udub dhexaad u yahay Conte iyada oo ay Italy beenisay saadaalihii tartanka kahor bilowgiisa la bixiyey madaama ay Group-kii ay ku jirtay kow uga soo baxday halka ay Spain ku soo qaarajisay Bordeaux wareegii 16-ka.
Hase yeeshee, De Rossi wali waxa uu qabaa dhaawac cajirka ah (Bawdada) oo ku dhacay kulankii ay 2-0 uga badiyeen gegida De France dalkii Euro-ga difaacanayey, Diktoor Enrico Castellacci waxa uu qiray in 32 jirku aysan muuqan soo laabashadiisa.
“Waa xaaald aad u adag,” ayuu yiri Castellacci. “Wax walba weynu isku dayeynaa si aan dib ugu helno. Laakiin ma bixin karno wax balan qaad ah.”
De Rossi maqnaashihiisa waxa ay dharbaaxo weyn ku tahay Italy oo dooneysa in ay markii labaad oo xiriir ah Euro-ga ka cirib tirto Germany kaddib markii ay 2-0 afar dhamaadkiisa sanadii 2012 ku rebeen Warsaw oo ah xarunta Poland.
Hadana, guushaas ay afar sano kahor gaareen waxa ay ka dhigan tahay in Italy ay la baratami doonto Germany iyaga oo aan guul daro kala kulmin sideed mar oo xiriir ah oo ay tartan weyn la ciyaareen, sidoo kale taasi waxa ay Azzurri ka dhigeysaa kuwa loolanka ka dhici doona Da Bordeaux ku cad cad.
Labada Laacib ee kala ah Toni Kroos iyo Jerome Boateng wey iska indha tireen taariikhahaas walow Italy tahay mid laf dhuun gashay ku ah Germany.
“Maxaan u qabayaa wal wal Talyaani ah? Taas waxa aad u baahaneysaa in aad ii sharaxdo marka hore,” ayuu yiri Kroos. “In badan lama ciyaarin Italy, markaa kulamadii hore waxba iima aha.
“Wey adag tahay in lala ciyaaro, gadaal ayey u dagaan weyna ku nastaan kubadda, sidaas sanado badan ayey u ciyaarayen. Itlay waa kooxda ugu adag ee aan ilaa iyo iminka wajahnay. Waan sugayaa waxaana qabaa kalsooni weyn.”
Boateng, oo dhaliyey goolkii daah furka u ahaa Germany kulankii ay 3-0 uga badiyeen Slovakia ayaa aragti ceynkaas ah isna qaba oo yiri: “Maya, xaqiiqdii wax ka daran ayaa jira la ciyaarida Italy.
“Waa muhiim, hase yeshee, waa in aynu u ciyaarno qaabkeena. Dabcan Italy waa kuwo si wanaagsan kaartada loogu tababaray. Waa muhiim in la helo xal Talyaaniga dhib la bado.”
Dhinaca kale, garabka Lazio Antonio Candreva waxa uu la dhibaatoonayaa dhaawac muruqa ah oo soo gaaray kulankii 1-0 uga badiyeen Sweden.
Thiago Motta isaga ganaax ayuu ku seegi doonaa kulanka kaddib markii uu huruudi labaad qaatay markii ay ka hor yimaadeen Spain.
Tababaraha Germany Joachim Low, hase yeshee, ma qabo dhaawac mushaakil ku abuuraya kahor is araga Italy.
-Germany waligood kama badin Italy tartan weyn (Afar guul daro iyo afar bar bar dhac). Taas waxaaba ka sii daran, dhamaan wey guul dareysteen dhamaan afarta kulan ee ay Italy la ciyaareen kulamada kala baxa ah (Knockout): Saddex mar waa koobka aduunka (Afar dhamaadkii 1970, fiinaalihii 1982 iyo afar dhamaadkii 2006) iyo mar koobka qaramada qaarada Europe ah (Afar dhamaadkii 2012).
-Is aragii ugu dambeyey ee Germany iyo Italy waxa uu ahaa bilowgii sanadkan, 29-kii Maarso: Wiilasha Low ayaa ku badiyey 4-1 ciyaar ka dhacday Munich.
-Gerany waxa ay soo gaareen afar dhamaadka tartamada waa weyn shantii mar ee ugu dambeysay (Koobkii aduunka 2006, Euro 2008, koobkii aduunka 2010, Euro 2012 iyo koobkii aduunka 2014).
-Germany waxa ay badisay 14 ka mida 17-kii kulan ee ugu dambeyey tartamada waa weyn, laba bar bar dhac ayey galeen halka dhulka la dhigay mar qura (Waxaa 2-1 uga badisay Italy afar dhamadkii Euro 2012).
-Germany wali waa dalka kaliya ee aan gool laga dhalin Eur0 2016. Markii ugu dambeysay ee ay shabaqa ilaashadeen afarta kulan ee ugu horeysa ee tartan weyn waxa ay ahayd koobkii aduunka 1978.
-Germany cel celis ahaan kubad haysashada waxa ay sameyeen boqolkiiba lixdan iyo sagaal (69%), waa cel celiska ugu badan ee Euro 2016.
-Italy waxa ay 19 jeer shabaqooda ilaashadeen 37 jeer oo ay Euro-ga dheleen, taas waxa ay uga badan yihiin dhamaan dhinacyada kale ee taariikhda tartanka bale hal jeer ayey ka badan yihin Germany (18 jeer ayey shabaqa ilaashadeen 47 kulan oo ay ciyaareen). Azurri gool quraa laga dhaliyey Euro 2016.
Hadii ay kaarka jaalaha ah qaataan kulankan ka xiga ayey segi doonaan: Boateng, Hummels, Khedira, Kimmich, Özil
Hadii ay kaarka jaalaha ah qaataan kulankan ka xiga ayey segi doonaan: Barzagli, Bonucci, Buffon, Chiellini, De Rossi, De Sciglio, Éder, Insigne, Pellè, Sirigu, Zaza
Dhex dhexaadiyaha: Viktor Kassai
Cimilada gegida: 19°C
By: Mohamed Musa Mohamed (Moh’ed Kaafi).
EURO 2016: Yuu xulka Wales ku beegmayaa wareegga afar dhammaadka, yaase loo doortay Man Of The Match?
KA BOGO: Rikoodhadii laga diiwaan galiyay kulankii uu xulka Wales ku reebay Belgium, uguna soo baxay wareegga afar dhammaadka EURO 2016